ရင်ခွင်တစ်​ခု ဖန်ဆင်းခြင်း: ချွတ်ယွင်းမှု၌ တွေးခေါ်ခြင်း
Posted by yangonthar at 3:52 AM
အတွေးအမြင်လေး တင်ပြထားတာ ကောင်းပါတယ်။
စိတ်တွေထဲမှာ တအားတင်းကျပ်ပီး ဘယ်လိုဖြေလျော့ရမလဲ စဉ်းစားနေတုန်း ဒီပို့စ်လေးကို ဖတ်လိုက်ရလို့ တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အကိုရန်ကုန်သားရေ
စိတ်ဖိစီးမှုတွေ တအားများလာတယ်အကိုရေ တစ်နေရာရာကိုတော့ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် သွားပစ်လိုက်ချင်တယ် :(
အမှန်ပဲ ရန်ကုန်သားရေ ..
ပါဠိလိုဆိုရင်တော့ ယောနိသောမနသိကာရပေါ့။ နှလုံးသွင်းမှန်ကန်မှု (သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာ နှလုံးသွင်းခြင်း) လို့ မှတ်သားဖူးပါတယ်။
ကိုယ့် အတိတ်က အကုသိုလ်ကံကြောင့် မကောင်းတာ မြင်ရ ကြားရ ခံစားရပေမဲ့ ယောနိသော မနသိကာရနဲ့ နှလုံးသွင်းနိုင်ရင် ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်။ အဲဒီလို နှလုံးသွင်းနိုင်ဖို့ကလဲ လေ့ကျင့်ပေးမှ ရမယ်တဲ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မကောင်းတာနဲ့တွေ့ရင် ရုတ်တရက် မကောင်းသလို တုန့်ပြန်ချင်တတ်တဲ့ မိမိမသိစိတ်အခံကြောင့်ပေါ့။ ဒါကြောင့် လေ့ကျင့်ယူမှသာ အကုသိုလ်ကနေ ကုသိုလ်ဖြစ်အောင် ပွါးယူနိုင်မှာ။
အမလည်း သိသာသိပေမဲ့ မကျင့်ဖြစ်ပါဘူး။ ကျင့်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေဆဲပါ။
ဒီစာလေးအတွက် ကျေးဇူးပါ ကိုရန်ကုန်သားရေ ... ။
Adaptation နဲ့ Compensation လေးအကြောင်းအတွေးတွေမျှယူသွားပါတယ် ရန်ကုန်သားရေ.. ခင်မင်စွာဖြင့်း)
တွေးစရာတွေတကယ်ရတာပေါ့ဗျာ . . . တစ်ခါတစ်လေများ
ရတော့ဘဲ ကိုယ့်စိတ်က ကို့ ကိုပြန်လှို့ ဝှက်နေတတ်သေးတယ်ဗျာ . . .
လူသားတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ် တိရိစ္တာန်တွေပဲ ဖြစ်ဖြစ် တစုံတဦးရဲ့ အသိအမှတ်ပြုမှုကို ခံချင်ကြသူချည်းပါပဲ။
ကောင်းတာတွေနဲ့ အသိအမှတ်ပြု မခံရတဲ့အခါ ဆိုးသွမ်းတဲ့ နည်းနဲ့ လူစိတ်ဝင်စားလာအောင် လုပ်ပြတတ်ကြပါတယ်။
အကောင်းဘက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အဆိုးဘက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် တရားလွန် ဖြစ်လာရင်တော့ လူတွေမှာ စိတ်ရောဂါ တမျိုးလို ရလာမယ် ထင်တာပါပဲ...
ဒီစာဖတ်ပြီးတော့တော့ တွေးမိတာလေးတွေ ရေးချမိတာပါ ရန်ကုန်သားရေ...
စိတ်က အရေးကြီးဆုံးဘဲဆိုတာ လက်ခံပါတယ်။
လူတစ်ယောက်စိတ်ဓာတ်က အတွေးနဲ့ဘဲ ဆိုင်လို့ထင်မိတယ်။အတွေးကောင်းလေးတွေမှ ကိုယ်ရဲ့စိတ်ကို ကွန်ထရိုး လုပ်နိုင်မှာပါ။
စိတ်ဓါတ်ခွန်အားကို တစုံတရာအထိ ပေးနိင်တဲ့ ဆောင်းပါးပါပဲ။
လူတိုင်းမှာသာ မျှတွေးခြေ ရှိရင် တနည်းအား ဖြင့် ကိုယ်ချင်းစာတရား ရှိနေရင် လောက ကြီးက တော်တော်သာယာ မှာပါ ဒါပေမယ့် မဖြစ်န်ိင်ပါဘူး။
လောကမှာ ဗုဒ္ဓတရားတော်နဲ့ သဘာဝတရား ကလွဲရင် အမှန်စစ်စစ်ဆိုတာ မရှိဘူး ယေဘူယျ အမှန်တရားပဲ ရှိတယ်လို့ ကျွန်တော် တော့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ဘက် ကိုယ်ကြည့်ပြီး အမှန်တွေ ၂ ဘက် ဖြစ်လာလို့ ရန်ပွဲတွေ နိင်ငံရေး စစ်ပွဲ တွေဖြစ်လာတာပေါ့။
ဒါကြောင့် မျှတွေးခြေ ရှိလာဘို့ အတွက် လူတိုင်း ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်ယူသင့်တာပါပဲ
ကိုယ့်စိတ်ဓါတ်ကို ကောင်းအောင် မျှတွေးတတ်အောင် လေ့ကျင့်သင့်ပါတယ်။
ဒီဆောင်းပါးလေးက များများ ဖတ်သင့်တဲ့ ဆောင်းပါးလေးပါပဲ။
(စိတ် ရှည် သည်းခံဖို့ အရေးကြီးပါတယ် စိတ်ထားတတ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ့်လို လူတွေ ဘယ်လို နေနေကြရသ လဲ ဆိုတာမျိုး လေ့လာတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။)
ဒီစာစုလေးကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နိင်ငံ ရဲ့ ကြုံတွေ့နေရပုံကို မြင်ယောင်ပြီး ဖတ်လိုက်မိရင် အငြင်းပွားဖွယ်ရာတွေ ဆက်တွေးမိမှာပဲ ။ တခါတလေ ပိုအင်အား ကောင်းတဲ့ အမှန်တရားနဲ့ ကြုံရတဲ့အရာ တချို့ အခြေအနေတွေက ပြိုလဲသွားရတယ်။
အဓိကက တော့ ကိုယ်ချင်းစာ တရားနဲ့ မျှတွေးတတ်သူတွေ ပိုများလာရင် လောကကြီးက ဒီ့ထက်ပိုသာယာလာမှာပါ။
ဆောင်းပါးဖတ်ပြီး အတွေးတွေ ပွားသွားမိ တယ် ရန်ကုန်သားရေ။
i've read it n i like it
a nice post with active thinking
ဟုတ်တယ်ကွာ။ အဓိကကတော့ အားလုံးစဉ်းစား ချင့်ချိန်ပြီး လုပ်ရင်ကောင်းမယ်။ ကောင်းတဲ့ အကျိုးမဖြစ်စေတဲ့ လုပ်ရပ် တော်တော်များများက စဉ်းစားနိုင်စွမ်း ကင်းမဲ့လို့ထက် မစဉ်းစားလို့ဖြစ်နေတာဆိုတော့ ရင်နာဖို့ကောင်းပါတယ်။ တစ်ယောက်တစ်ယောက် တစ်နိုင်ငံနဲ့ တစ်နိုင်ငံ ပြိုင်ဆိုင်ရန်လိုတာထက် အတူ နားလည်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်သာယာလိုက်မလဲ။ ဗီဇာတို့ နိုင်ငံသားတို့ လည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ နယ်နိမိတ်ဆိုတာလည်း ၀န်ရိုးစွန်းတွေပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်။
တစ်ယောက်တည်းပဲ စာချည်းဖတ် သဘောပေါက်တယ် ဆိုရင် စာရဲ့ သဘောတရားတွေပဲ အကျိုးသက်ရောက် လိမ့်မယ်။ လက်တွေ့မပါတဲ့အတွက် သူ့ဘာသာတော့ ပညာရှိပဲ ဒါပေမယ့် လူအများနဲ့ သဟဇာတဖြစ်ဖို့ ခဲယဉ်းလိမ့်မယ်။ ဆွေးနွေးဖော် တိုင်ပင်ဖက် မရှိဘဲ တစ်ယောက်တည်း ဖြစ်မှုဟာ လူမိုက်နဲ့ ပေါင်းသင်းသလောက် ဆိုးပါတယ်။ (စာတွေက မစီထားဘူးကွာ၊ ငါပေါ်လာတာတွေ ချရေးလိုက်တာ၊ အကြောင်းမညီလို့ သည်းခံပါ) အီးမေးလ်မှာလည်း မတွေ့ဘူး။ စာမေးပွဲနဲ့ လုံးပန်းနေရပြီလား။ ကြိုးစားထားကွာ။ နောက်မှ တွေ့ကြတာပေါ့။
"စိတ်ကို ထားတတ်ဖို့အင်မတန်အရေးကြီး ပါ တယ်။ စိတ်ထားတတ်တဲ့သူဟာ ဘယ်လောက် ဆိုးရွားတဲ့ အခြေ အနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် compensate လုပ်နိုင်ပါ တယ်။ ဒီလို လုပ်နိုင်ရင် နည်းလမ်းဆိုတာ ပေါ်လာတာပါပဲ။ မိမိရဲ့ဆန္ဒ လက်တွေ့ ဘဝမှာ ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက် လာ ဖို့ “နည်းလမ်းကောင်း” ရွေးချယ်တတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဆိုးရွားနေ တဲ့ ဖြစ်တည်မှု သို့ မဟုတ် အခြေအနေတစ်ခုခုက ရလာတဲ့ ခံစားမှုကို အားအဖြစ်ဖန်တီးနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ စိတ်ဆို တာ မထားတတ်ရင် compensation မလုပ်နိုင်ရင် မျှတစွာ မတွေးတတ်ရင် မချမ်းသာပါ ဘူး။ ထို့ အတူပဲ မိမိ ကိုယ်တိုင် (စိတ်) ချမ်းသာမှု မရှိတဲ့သူဟာ တပါးသူအပေါ် ကောင်းကျိုးချမ်းသာ ပြုနိုင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါ။ ကု သိုလ် ပညာ ဥစ္စာတွေ ရဖို့မပျော်ပေမယ့် တော်ရာ အရပ်မှာနေ ကြရလို့ပျော်အောင် တစ်နည်း အားဖြင့် မပျော် သော် မှ နေသာအောင် compensate လုပ် ပြီးနေကြရသလို မိမိကိုယ်မှာ ရှိနေတဲ့ မပြည့်စုံမှု ချွတ်ယွင်းမှုတွေကြောင့် နင့်နင့်သည်းသည်း နာနာကျင်ကျင် ခံစားရတဲ့အခါမှာလည်း compensate လုပ်နိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ စိတ် ရှည် သည်းခံဖို့ အရေးကြီးပါတယ် စိတ်ထားတတ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ့်လို လူတွေ ဘယ်လို နေနေကြရသ လဲ ဆိုတာမျိုး လေ့လာတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။" ဒီစာပိုက်လေးကို အကြိုက်ဆုံးဘဲ..ဟုတ်တယ်ဟ.. အဲဒီလိုမှဘဲ လူဘ၀မှာနေပျော်တော့မှာပေါ့..တန်ဖိုး၇ှိတဲ့ဆောင်းပါးလေးပါဘဲ..
မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေ.. ဖြစ်ပြီးသားတွေ အတွက် စိတ်ဆင်းရဲနေလို့လည်း ဘာမှ ဖြစ်မလာဘူးလေ.. ဖြစ်နိုင်တာကိုသာ ဖြစ်အောင် ကြိုးစားရမှာပေါ့နော်..
Yin Min Htun said...